SAWIRRO:-RW Rooble oo sagootin qurux badan u sameeyay Ben Fender – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRRO:-RW Rooble oo sagootin qurux badan u sameeyay Ben Fender
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaliya Mudane, Ben Fender kaasi oo ay u dhamaatay muddaadii shaqadiisa.
Mas’uuliyiintan ayaa ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriiirka ka dhaxeeya labda dal.
Safiirka Ingiriiska u joogay Soomaaliya ayaa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay dalka iyo sida loogu fududeeyay inuu guto howlihiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa uga mahadceliyey safiirka kaalintii uu ka qaatay xoojinta xiriirka labada dal, isagoo u rajeeyey safiirka mustaqabl wanaasgan.
Madaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray geerda Senatar Maxamed Yuusuf